Bus Air conditioner Manufacturers & Suppliers - China Bus Conditioner Factory
SZQ usoro a ụdị gbawara n'etiti n'elu ụlọ n'elu unit nke ikuku conditioner maka 8.5m ka 12.9m si aku ot bọs, nchịkwa, ụlọ akwụkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ articulated ụgbọ ala. Usoro nwere ụdị okpomọkụ dị elu dị. Ike jụrụ nke usoro ụgbọ elu ikuku ụgbọ elu sitere na 20kW ruo 40kW, (62840 ruo 136480 Btu / h ma ọ bụ 17200 ruo 34400 Kcal / h). Banyere igwe ikuku maka minibus ma ọ bụ ụgbọ ala na-erughị 8.5m, biko rụtụ aka na SZG usoro.
SZG usoro bụ ụdị nke n'elu n'ịnyịnya ikuku conditioner. Ọ metụtara na ụgbọ ala obodo 6-8.4m na bọs ndị njem nleta 5-8.9m. Iji nwee ohere kachasịsịsịsị nke ngwa nke ụdị bọs, e nwere ụdị obosara abụọ nke usoro SZG, na 1826mm na 1640 n'otu n'otu.
N'ịza oku nke obodo a site na 2014 ruo ugbu a, China emeela ihe ọhụụ ọzọ na igwe ikuku ikuku na nke mbụ, tinye teknụzụ eletriki ikuku eletrik karịa nke ọma na igwe ikuku anyị, na mepụtara ụdị dịgasị iche iche Ngwaahịa iji gboo mkpa ahịa.